QEYLO DHAAN WAA WAREY - LINKIGAAN AKHRIYA
QEYLO DHAAN WAA WAREEY: Dalka Soomaaliya Bad iyo Beriba badbaado ayuu u baahan yahay, Dalka yaa u maqan? aaway dadkiisii?- LINKIGAAN AKHRIYA http://somaliatalk.com/2009/may/13/
Walaalayaal waan idin salaamay
Salaama Caleykum Waraxmatulaahi Wa barakaatu. Bacda Salaam
Marka hore waxaan doonayaa inaan idiin sheego in Soomaalidu wax ka dhaxeeya aysan aqoon oo aan qabiil aheyn, oo sidii aan ugu jirnay qabiil ku kala aarsasho uu waqtiba waqti kale noo dhiibay oo sidaas aan ku dhameysanayo qarniyo Jaahiliya ah.
Dhulkeenii waxaan ku balaleynay cadaawad qabiil owgeed oo aan isku qabno, innaga oo is leh maxaa iga galay degaan hebel waxaa degan reer qansax oo haddii dhib dhaco ayaga ayuu ku dhacayaa.
Walaalayaal waxaad mooda xitaa in Soomaalidu ku kala tageen magacii ka dhaxeeyey ee ahaa Soomaaliga, kii diintii Islaamimo iyo kii dhaqankii iyo dalkii innaga dhexeeyey. Waxaa inoo haray waa luqadda afsoomaaliga oo keliya oo aan hadda isku afgarano, taasna waxaa qurbaha ka imanaya caruur hadda qaan gaartay oo aan luqada Soomaaliga xarafna ka aqoonin. Waxaad moodaa in haddana luqadiina lagu kala tegi doono qaraniga soo socdaa, maadaama aysan waalidiinta qurbaha jooga aysan ilmahooda barin wax ku saabsan dhaqan, luqada iyo diinta lagu yaqaano Soomaalida. Waa lur kale oo soo socda.
Walaalayaal intaas waxaa ka daran wadankeena oo marba qoladii timaata ee siyaasiyiin isku sheegta iney sidey doonaan ka yeelaan oo marna Itoobiyaan la siiyo marna keenyaan la siiyo iyadoo dadkii u dhashay ay gaajo iyo haraad iyo dayac xumo la baqtinayaan. Ma Meles Zenawe ayaad ka wadaniyad liidataan, isba markuu hadlayo wuxuu leeyahay dalkeyga ayaan difaacanayaa!!, Aduguna Soomaaliyow maad kaaga difaacatid inta qabiilka meel iska dhigto adiga oo ilaalinaya deris wanaaga iyo dalaka jaarka kula ah oo aadan ku xad gudbin.
Walaalayaal wadankeenu waa innaga badan yahay, waxaana ilaahey ku maneystay kheyraad balaaran oo macdan, petrolium, uranium, kaluun qaali ah iyo waxkasta oo naftu jecleysato, badeena inta ay baaxadiisu la eg tahay waad aragteen, laakiin ilaahey dadkiisii ma tusin kheyraadka ka badan oo ay gaajada uga bixi lahaayeen, waxa ay la mid tahay qof ilaahey uu qurux ku maneystay oo aan isku jeedin.
Walaalayaal wax kasta oo Soomaalidu ay geesi, wadani iyo dhiig laheyd, waxaa dhaafsiiyey qabyaalad iyo maxaa iga galay dhibku wuxuu ku dhacayaa reer hebel, balse dhibkii ku dhaca hal qoys oo Soomaali ah waxa uu saameynayaa annaga oo dhan oo wuu nagu wada dhacaya, waxa ay la mid tahay hadalkii ahaa haddii jirka uu meel ka bukoodu waxaa wada bukoonaya jirka oo dhan. Soomaalidu waa dad is dhalay oo isku dhaxay oo dhibku meel uu inaga soo galaba waa uu inna taabanayaa.
Walaalayaal haddii hal qabiil oo Soomaali ah uu dhib gaaro, wuxuu wada gaaraya Soomaali oo dhan, waxaadna ka daalacan kartaa intii burburka Soomaaliya uu jiray wuxuu wada saameeyey Soomaali oo dhan, waxaana la isugu yimid qurbe aan lagaa dooneynin, tahriib lagu dhamaaday, iyo dayac daro intii dalka ku hartay ku heysata.
Walaalayaal wadankeenii maanta burbur ayuu ku jiray laakiin arrintii waa la iskala soo dhaafay intii hore, oo arrintii waxa ay mareysaa MAXAA NAGA GALAY AWALBA KOOX KASTA WAA AY GADAN JIRTAY EE ANAGUNA MARKEENA AAN GADANO, OO AAN KA FAA'IIDEYSANO FURSATA AAN HAYSANO OO AAN GURIGEENA KA NOOLEYSANO INTA AAN KURSIGA KU FADHINO, WIXII DHINAYA WAXBA INAGAMA GELIN.
Waana midda maanta na heysta ee keentay Qeyla dhaanta oo inta berigii la isla dhaafay hadda baddeenii la leeyahay waxaa la siiyey Kenya ama waa damacsan tahay iney qaadato qeyb ka mid ah, koley waa isla meeshii, bal daalacda qoraalkaan sida cilmiyeysan loo soo baaray ee loogugu qeexaya afkaaga hooyo si aad u fahamto, waxaana soo diyaariyey dhalinyaro aqoonyahano ah oo wadaniyiin ah ee somaliatalk, http://somaliatalk.com/2009/may/13/ , Ilaahey ajar aan go'in ha ka siiyo aduun iyo aakhiro oo ha heeyo darjo meesha ugu sateysa, amen.
Wadankeenii waxaa iibsanaya rag la seexiyey ama la jiifiyey hotelo kenya ku yaala oo dhal-dhalaalka aduunak wax weyn u heysta, berina ka daba marnaan doona. Arrintu bad ka weyn haddii aadanan maanta wax ka qaban. waxay kugu noqon doontaa wax aan wax laga qaban doonin oo Soomaaliya waxaa ku dhaceysa sida Falastiin.
Walaalayaal koleyba annagu galbanay oo dowlad la'aan iyo qurbe iyo dayac ayaan ku weynaanay, ee ma u naxeynaa ilamaheena iyo kuwa ay sii dhali doonaan iyo kuwa ka sii danbeeya?
Haddii aan isku fiirsano dhibaato kasta oo dalkeena iyo dadkeena loo geysto, oo dhulkeena la qaato, maxay ubadkeena iyo ubadkoodu ay dhaxlidoonaan?
Wadanka Soomaaliya waxaa la soo geliyey Itoobiyaan dad shacab ah oo masaakiin ah oo walaalahaa ah ayey xasuuqday, waa la isku fiirsaday oo waxaa la yiri maxaa innaga galay reer Qansax ayaa dhibku heystaa, balse waxaa loo huray dhiig iyo wiilal yaryar naftooda, ilaaheyna waa ku guuleysiiyey oo cadowgii waa la saaray oo wadankii waa xor, inkasta oo ay weli joogaan ciidama shisheeye.
Waxaa markaan haddana la isku heystaa baddahii wadankeena oo ay isugu yimaadeen shisheeye oo dhan, qolo kastana waxa ay soo haweysatay dalkeena markii ay arkeen in Soomaalidu ay tahay dad cawaan ah oo dagaal ay iyaga keliya isku dilaan yaqaana, oo aan u jeedin kheyraadka ilaahey ku maneystay, baaxadda dalkooda, oo intii ay ku noolaan lahaayeen nolol nabad ah ee barwaaqo ah sida sacuudiga, ka door biday iney isku heystaa oo isku dilaan dhul eber ah, sidaasna ay quwada shisheeye kaga faa'iideystaan wixii ay u jeedi waayeen Soomaalidu.
Walaalayaalow kuwiina aan dagaalkii caowga wadanka looga xoreeyey ka qeyb qaadan, hadda waa iney ka qeyb qaataan ilaalinta wadankeena, Dagaal iyo qori lagaama baahna ee waxaa lagaa doonayaa waa qoraal iyo af inaad ku difaacdo kheyraadka dalkeena Soomaaliya, si aan ubadkeenu kuwa ay sii dhalayaan aysan u nabaad guurin.
Haddii xataa been lagu sheegay inaan qeyb badda Soomaalia ah la gadan, wixii la sheego wax uun baa jira, ee Soomaaliya yeysan noqon halaqyo mareen, ee inta goori goor tahay ha lawada ilaalsado waxa keliya ee innaga dhaxeeya ee ah dalka Soomaaliya. Hal mar uun aan midowno oo aan iska deyno waxyaabaha aan ku kala qeybsan nahay ee ah qabiilka, qabyaaladda, koox diimeedka iyo koox siyaasadeedka, ee midda wadaniyadda aan hal qof ka ahaano.
War dalka iyo dadka yaa u maqan?, war aakhiro waa la iska weydiin doona ee aan mar uun aan cawaanimada ka baxno oo aan iska deyno dilka aanu inagu isku muuqano, Adduunka aan wax la qabsano, annaga oo sidooda oo kale u ilaashaneyna dalkeena kana shaqeyneynaa hor umarka ummadeena. War inta hartay aan is daba qabno inta goori goor tahay.
Soomaaliyeey aduunkaan waa laga tegayaa, aawaay aabayaasheenii? aaway awoowayaasheeni iyo awoowayaashoodii? ma waxaan isku heysanaa wax qabri laga gelayo oo laga tegayo?
Bal eeg waxa reer galbeed u tageen dhulka Talabaan, waa iney dadkooda iyo dalkooda ka badbaadsadaan kuwa ay u arkaan iney yihiin mitidiin, taasiba sow muwaadinimo ay inna dheer yihiin ma aha?, Ninna dhulkiisii ayuu ka tegay oo mid kale uga duulay si uu uga hortago in kiisa loogu yimaado, adigana kaagii ayaad ilaalsan la' dahay!!!. Cajiib sow maaha?
Walaalayaalow yaan warkeyga si kale loo fasiran oo yaan arriimo siyaasadeed iyo mid qabiil lagu mal dihin ee aan ka eegno dhanka Soomaalinimada iyo waxa innaga dhexeeya oo ah dalka, taas oo aan doonayo in Soomaalidu isaga mowqif ahaato. Ha aaminina nin kursi ku fadhiya oo darajo doon ah oo meel kale laga mushaar siiyo, oo warka uu sheego uu yahay mid uusan ka run sheegi karin, maadaama cidda mushaarka siisa oo haddii uu sirtooda uu ka shifo uu ku kursi weyn doono ama uu ku mushaar weyn doono.
Dalku wuxuu u baahan yahay waa adinka, waa dad ilaah iyo islaam yaqaanna, waa dad dal iyo dadnimo wax ka yaqaana, waa dad waxa la isku yahay iyo inaan lakala maarmin yaqaana, bal eeg sida dhalinyada warbaahinta somaliatalk ay isku xil qaameen http://somaliatalk.com/2009/may/13/ , yaa ku lacag siiyey ama ku darajo siiyey?, sow ma aha kuwa is xil qaamay? maad ku dayatid iyaga ayaa mudan in lagu dayday. Ma garan kartaa markii ay soo qoreen in markab Kenyaan ah uu taagan badda u dhow kismaayo oo ay baaritaan batdool iyo macdan halkaasi ay ka sameynayeen? waa isla dhul badeedkii midda maanta la leeyahay waa laga iibiyey, koleyba waxa ay ka heleen wixii kheyraad ah ee ay baaranayeen.
Ma jaziiradiihii jawaal iyo jawiil ayaad sidaas ku sii deyneysaan?.
Wixii dhiiglahow kaca